သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Element ကို Society က
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျူးလွန်နေသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာသင်သည်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုလုံခြုံအောင်ဘယ်လို
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာများ - တစ်ဦးများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်သေပြမှာသဘာဝလူတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းမဆိုသတင်းအချက်အလက်။
ထုတ်ယူခြင်း - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏အစုံပေါ်ဖျော်ဖြေသောစစ်ဆင်ရေးမဆိုစစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်အစုံ။
ဒေတာကိုဘာသာရပ် - အဘယ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျက်ရှိသည်သဘာဝလူတစ်ဦး။
ကလေး - အသက် 16 နှစ်အောက်သဘာဝလူတစ်ဦး။
ငါတို့က (အရင်းအနှီးသို့မဟုတ်မဖြစ်စေ) -
processing, အေပျတရားမျှတ, ပွင့်လင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ယူခြင်းလှုပ်ရှားမှုများအရာကိုပြုသင့်သည်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုထုတ်ယူခြင်းရှေ့၌သင်တို့အခွင့်အရေးများစဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှကန့်သတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ယူခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုစုဝေးစေခဲ့သည့်အဘို့ရည်ရွယ်ချက် fit ။
processing အနည်းငယ်မျှသာဒေတာနှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဆိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏အနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုသာစုသိမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်။
အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ကာလနှင့်အတူကန့်သတ်သည်။ ကျနော်တို့လိုအပ်သည်ထက်ပိုရှည်ဘို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမည်မဟုတ်။
ညာဘက်သတင်းအချက်အလက်မှ - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုစီမံဆောင်ရွက်နေပါသည်ရှိမရှိသိရန်ညာဘက်ရန်ရှိသည်အဓိပ္ပာယ်; အဘယ်အရာကိုဒေတာကြောင့်ရရှိသောအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်တော်မူသောရာကနေ, စည်းဝေးရာသို့ရောက်ရှိပါသည်။
ညာဘက် access ကိုမှ - အဓိပ်ပာယျသငျသညျသငျသညျအကွောငျးကို / ထံမှကောက်ခံ data တွေကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများမိတ္တူကိုစုဝေးစေတောင်းဆိုရန်နှင့်ရယူရန်သင့်ညာဘက်ပါဝင်သည်။
ညာဘက်ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှ - သင်တိသို့မဟုတ်မပြည့်စုံကြောင်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်တောင်းဆိုရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အဓိပ်ပာယျ။
ညာဘက်ဖျက်ဖို့ - အချို့သောအခြေအနေများတွင်အဓိပ်ပာယျသင်တို့သည်ငါတို့၏မှတ်တမ်းများကနေဖျက်ခံရဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအဘို့တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ညာဘက်အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ရန် - အချို့သောအခြေအနေများလျှောက်ထားဘယ်မှာအဓိပ္ပာယ်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ထုတ်ယူခြင်းကန့်သတ်ထားရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ညာဘက်အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်ရန် - အချို့သောကိစ္စများတွင်အဓိပ်ပာယျသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အမှု၌ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထုတ်ယူခြင်းကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ညာဘက် automated ထုတ်ယူခြင်းကန့်ကွက်ရန် - သငျကိုအပါအဝင် automated ထုတ်ယူခြင်းကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အဓိပ်ပာယျ; နှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ automated ထုတ်ယူခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်သို့မဟုတ်သိသိသာသာသင်ထိခိုက်ဥပဒေရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးရလဒ်ကိုလည်းမရှိအခါတိုင်းဤသည်ဖြောင့်မတ်သငျသညျကငျြ့သုံးနိုငျသညျ။
ညာဘက် data တွေကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန် - သင်ကစက်-ဖတ်လို့ရအောင် format နဲ့ဒါမှမဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်ပရိုကနေတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းအဖြစ်, ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တိုင်ကြားချက်အိပ်ခွင့် - ငါတို့သည် Access ကိုအခွင့်အရေးအောက်မှာသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုငွငျးသောဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးလမ်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ကြပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
၏အကူအညီများအတွက်လက်ျာဘက် ကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာ - သင်ကကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာများ၏အကူအညီနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟုဆိုကာကဲ့သို့သောအခြားဥပဒေရေးရာကုစားဘို့လက်ျာဘက်အဘို့အခွင့်ရှိသည်အဓိပ်ပာယျ။
ညာဘက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းဖို့ - သင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထုတ်ယူခြင်းများအတွက်မဆိုပေးထားသဘောတူညီခကျြရုပ်သိမ်းပေးရန်။
သင်တစ်ဦးထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကြောင်းအဓိကအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ - ဤသည်သင်၏ e-mail, လိပ်စာ, နာမည်, ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, အိမ်လိပ်စာစသည်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားလှုပ်ရှားမှုများမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးသတင်းအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းပါ။ ဤအချက်အလက်ဥပမာ, သင်တို့၏နာမနှင့် e-mail လိပ်စာပါဝင်သည်။
ဤသည်ကိုအလိုအလျောက် cookies တွေကိုနှင့်အခြား session တစ်ခု tools များအားဖြင့်သိုလှောင်ထားကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်စျေးဝယ်လှည်းသတင်းအချက်အလက်, သင့် IP လိပ်စာ, သင့်စျေးဝယ်သမိုင်း (ဆိုရှိလြှငျ) စသည်တို့ကိုဤအချက်အလက်သည်သင်၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website ရဲ့ contents ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်လှုပ်ရှားမှုများ logged နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိသည်အတည်ပြုချက်ကိုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမိတ်ဖက်များထံမှသတင်းအချက်အလက်စုသိမ်းမည်။ ဤသည်သင်နှင့်အတူဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအခြားဥပဒေရေးရာမြေပြင်ပေါ်တွင်သင့်အကြောင်းကိုစုဝေးစေကြပြီတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပေးအပ်ကြပါပြီဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာရင်းတွင်ဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ NCS ကိုးစား EFL Trust မှ။
ကျနော်တို့လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ကြောင်းကိုသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပေလိမ့်မည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ဝန်ဆောင်မှုပေး။ ဤသည်သင့်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပမာ, ပါဝင်သည်; သငျသညျမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြသောအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှင့်အတူသငျသညျပေး; သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှာပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းများနှင့်အတူသငျသညျပေးနှင့်ထိုထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့နှင့်အတူအဆက်သွယ်; ဆက်သွယ်နှင့်သင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်; နှင့်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြောင်းအလဲများသင့်အားအကြောင်းကြား။
ကျနော်တို့နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူတရားဝင်မြေပြင်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအသုံးပြုပါ။
သင်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပူဇော် / ထုတ်ကုန်သင်ပို့ခြင်းငှါ၎င်း,
သငျသညျ (ငါတို့နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်မိတ်ဖက်ထံမှ) ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလှမ်းမှု * ပေးပို့ရန်;
အရည်အသွေး, အမျိုးမျိုးနှင့်ထောက်ပံ့ / ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မှုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုအခြေစိုက်စခန်း (purchasing အပြုအမူနှင့်သမိုင်း) စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်,
နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကြပြီမဟုတ်အဖြစ်ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုသမိုင်း / browsing အတွက်အပြုအမူဆင်တူသို့မဟုတ်တူညီသောဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စဉ်းစားပါ။
သငျသညျသတင်းလွှာနှင့် (ကျွန်တော်တို့နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်မိတ်ဖက်ထံမှ) မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကမ်းလှမ်းမှုပေးပို့ဖို့;
ငါတို့သည်ပညတ်တရားကနေမြင့်တက်တာဝန်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပညတ်တရားအားဖြင့်ပေးရှေးခယျြစရာအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုလုပ်ငန်းစဉ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုစုဝေးစေ anonymise ရန်နှင့်မဆိုဤကဲ့သို့သောဒေတာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့က anonymised ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခါမှသာဤပေါ်လစီ၏နယ်ပယ်အပြင်ဘက်ဒေတာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဒီလိုခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ငွေတောင်းခံရန်မကယ်မပါဘူး။ ကျနော်တို့5နှစ်ပေါင်းထက်ပိုရှည်သရွေ့စာရင်းကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ်ပညတ်တရား၏လက်မှ deriving သည်အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်လိုအပ်အဖြစ်အဘို့အသငျသညျအကွောငျးကိုစုဝေးစေအခြားဝယ်ယူအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းပေမယ့်မည်မဟုတ်။
ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ရည်ရွယ်ချက်များ, အခြေအနေတွင်နှင့်သဘာဝအကြား link ကိုထပ်မံထုတ်ယူခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်၏
ကျနော်တို့သူစိမ်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဝေမျှကြပါဘူး။ သငျသညျအကွောငျးကိုကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဖြစ်နိုင်သမျှကိုသင်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးစေရန်သော်လည်းကောင်းသို့မဟုတ်သင့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမိတ်ဖက်ပေးအချို့ကိစ္စ၌တည်ရှိ၏။ ကျနော်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမျှဝေ:
ငွေပေးချေမှုများအတွက် paypal ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့သင်တို့အကြောင်းကြားထားပါသည်။
အဆိုပါ NCS Trust မှ - သာ NCS အစီအစဉ်များအတွက်။
EFL Trust မှ - သာ NCS အစီအစဉ်များအတွက်။
ကျနော်တို့သာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လုံလောက်သောအဆင့်ကိုသေချာစေရန်တတ်နိုင်နေသောထုတ်ယူခြင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တရားဝင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝနျရှိကြသောအခါကျနော်တို့တတိယပါတီသို့မဟုတ်ပြည်သူ့အရာရှိများမှသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုထုတ်ဖော်။ သငျသညျကဝန်ခံလျှင်သို့မဟုတ်ပါကအခြားဥပဒေရေးရာခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်လျှင်ကျနော်တို့တတိယပါတီများမှရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုထုတ်ဖော်ပေလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် (ထိုကဲ့သို့သော HTTPS ကိုကဲ့သို့) ဒေတာလွှဲပြောင်းဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံသော protocol ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့အမည်ဘယ်မှာသင့်လျော် pseudonymising ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအားနည်းချက်များနှင့်တိုက်ခိုက်မှုဘို့ငါတို့စနစ်များကိုစောင့်ကြည့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသော်လည်းကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးအာမခံလို့မရပါဘူး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သဒေတာပြိုပျက်ရာ၏သင့်လျော်သောအာဏာပိုင်များကိုအကြောင်းကြားဖို့ကတိပေး။ သင့်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားကိုခြိမ်းခြောက်ရှိလျှင်ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပေါ်သင့်ပါတယ်ကျနော်တို့ကလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နဲ့အာဏာပိုင်များကူညီပေးဖို့ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိုင်အရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအကောင့်တစ်ခုရှိပါက, သင်သည်သင်၏ username နှင့် password ကိုလျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။
ကျနော်တို့စုဆောင်းသို့မဟုတ်သိလျက်ငါတို့၏ website မှတဆင့် 14 ၏နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်ကြပါဘူး။ လူငယ်တစ်ဦးမေတ္တာထားသကဲ့သို့ရှိစိတ်ဝင်စားနေသောလူငယ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များတက်ရောက်ခြင်း။ မိဘ၏ဒေတာထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါမိဘများကဒီဒေတာကိုနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ဖောက်သည်အပြုအမူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝက်ဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုသူများ '' လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံများနှင့်သုံးစွဲသူများကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်ကွတ်ကီးနှင့် / သို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံ personalize နှင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက cookie ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားမယ့်သေးငယ်တဲ့စာသားဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုဒ်များကိုအလုပ်မလုပ်အောင်ကူညီဖို့အသုံးပြုကြောင်း cookies စတိုးဆိုင်သတင်းအချက်အလက်။ သာငါတို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါ cookies များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်က browser ကိုအဆင့်မှာသင့်ရဲ့ cookies တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းအချို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကသင်၏အသုံးပြုမှုကိုဟန့်တားစေနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်:
လိုအပ်သော cookies တွေကို - သင်သည်ထိုသို့သောအတွက် logging အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အချို့သောအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးချနိုင်မှဤ cookies များကိုလိုအပ်သည်အဲဒီ cookies တွေကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းကြဘူး။ ။
functionality cookies များကို - ဤ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ပိုမိုအဆင်ပြေကိုဖြစ်နိုင်သမျှပိုပြီးစိတ်ကြိုက် features တွေပေးစေသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေး။ သငျသညျမှတ်ချက်ပေးသည့်အခါနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းဤအချက်အလက်ရန်မလိုပါဒါဥပမာ, သူတို့မှတ်ချက်ပုံစံများ၌သင်တို့၏နာမကိုအမှီနှင့် e-mail ကိုမှတ်မိပေလိမ့်မည်။
Analytics မှ cookies များကို - ဤ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်မှုကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုကြသည်
Advertising ကြော်ငြာ cookies တွေကို - ဤ cookies တွေကိုသင်နှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်သင်တစ်ဦးကြော်ငြာကိုတွေ့မြင်အကြိမ်အရေအတွက်ကန့်သတ်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကြော်ငြာ network များသဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှချထားပါသည်။ ဒီကွတ်ကီးတွေကိုသင်က website တစ်ခုသွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဤအချက်အလက်ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာကဲ့သို့သောအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူမျှဝေကြောင်းသတိရပါ။ မကြာခဏပစ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်ကြော်ငြာ cookies များကိုအခြားအဖွဲ့အစည်းကထောက်ပံ့ပေး site ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ browser setting ကိုမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းထား cookies တွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ် privacy ကိုတိုးမြှင့်ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. အချို့သော 3rd ပါတီ cookies တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည် optout.aboutads.info or youronlinechoices.com။ cookies တွေကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, အလည်အပတ်ခရီး allaboutcookies.org.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် traffic ကိုတိုင်းတာရန်ကို Google Analytics မှသုံးပါ။ Google ကသင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီရှိပါတယ် ဒီမှာ။ သငျသညျကို Google Analytics ကခြေရာခံထဲကရွေးချယ်ချင်ပါတယ်လျှင်, သွားရောက်လည်ပတ် Google Analytics သည်ဘေးဖယ်ထုတ်စာမျက်နှာ.
အင်္ဂလန်မှာဒေတာများအဘို့ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် - https://ico.org.uk - ICO - ပြန်ကြားရေး Commision ရုံး
ဒြပ်စင်လူ့အဖွဲ့အစည်း - ဒေတာဆွေးနွေးရန် 0114 2999 214 ခေါ်ဆိုပါ။
နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံ 21 / 05 / 2018 ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။